China Furfural sy katsaka mamokatra furfural process mpanamboatra sy mpamatsy |JINTA
Ny akora fibre misy zavamaniry Pentosan (toy ny Corn cob, akorandriaka voanjo, akorandriaka voa landihazo, hazom-bary, vovobony, hazo landihazo) dia hihidroly amin'ny pentose amin'ny alàlan'ny mari-pana sy catalista sasany, ny pentose dia mamela molekiola rano telo mba hamorona furfural.
Ny koba katsaka dia ampiasaina amin'ny fitaovana matetika, ary aorian'ny dingana maromaro izay misy ny fanadiovana, fanorotoroana, miaraka amin'ny hydrolysis asidra, distillation mash, neutralization, dewatering, fanadiovana mahazo ny furfural mahafeno fepetra amin'ny farany.
Ny "fako" dia halefa any amin'ny fandoroana boiler, ny lavenona dia azo ampiasaina ho fitaovana feno ho an'ny fotodrafitrasa na organika.
Satria ny furfural dia manana vondrona miasa aldehyde sy dienyl ether, ny furfural dia manana ny toetran'ny aldehydes, etera, diene ary zavatra hafa, indrindra mitovitovy amin'ny benzaldehyde.Amin'ny toe-javatra sasany, ny furfural dia afaka mandalo ireto fanehoan-kevitra simika manaraka ireto:
Ny Furfural dia oksidina hamokatra asidra maleika, anhydride maleika, asidra furoika ary asidra furanika.
Ao amin'ny dingan'ny entona, ny furfural dia oksidin'ny catalyst mba hamokatra asidra malika anhydrous.
Ny hydrogenation Furfural dia afaka mamokatra alikaola furfuryl, toaka tetrahydrofurfuryl, methyl furan, methyl tetrahydrofuran.
Furan dia azo atao amin'ny etona furfural sy ny etona rano aorian'ny decarburization miaraka amin'ny catalyst mety.
Furfural dia mandalo fanehoan-kevitra Coniaro eo ambanin'ny fihetsiky ny alkali mahery mba hamokarana alikaola furfuryl sy ny sodium furoate.
Furfural dia afaka mandalo fanehoan-kevitra Boqin eo ambanin'ny asan'ny sira asidra matavy na fototra organika ary miforitra amin'ny anhydride asidra mba hamorona asidra furan acrylic.
Furfural dia condensed amin'ny phenolic Kamban-teny mba hamokatra thermoplastic resin;voapoizina amin'ny urea sy melamine izy io mba hanaovana plastika;ary voapoizina amin'ny acetone izy io mba hahatonga ny resin furfurone.
1. Azo ampiasaina hanesorana metaly mavesatra avy amin'ny rano maloto izy io, ary azo ampiasaina mba hisorohana ny takelaka vy manify mafana tsy hifikitra.
2. Azo ampiasaina amin'ny famokarana baoritra, baoritra simenitra ary biriky simenitra, ary azo ampiasaina ho famenoana lakaoly na mametaka.
3. Azo ampiasaina ho sakafo premix, methionine, lysine, lysine proteinina vovoka, betaine, bobongolo isan-karazany fanomanana, antifungal mpiasa, vitaminina, phospholipids, phytase, flavoring mpandraharaha sy madurin, fiarovana Common anzima choline klôro, sns, veterinera zava-mahadomelina additives , mpitatitra sakafo mahavelona, ​​afaka manolo vovoka faharoa, ary iray amin'ireo akora fototra ho an'ny fermentation ny vokatra biolojika.
4. Ampiasaina amin'ny fanodinana furfural sy xylitol.
teo aloha: Ny famokarana peroxyde hydrogène
Manaraka: Fomba famokarana ethanol